Liverpool ayaa war farxad leh ka heshay xaaladda xiddigeeda xanuunka Korona Fayraska u jiifay ee Mohamed Salah oo seegay kulankii ay xalay 3-0 ku garaaceen Leicester City.
Tababare Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyey in baadhitaankii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey Mohamed Salah uu muujiyey inuu badqab ka yahay xanuunka Korona Fayraska ee uu kasoo qaaday waddankiisa Masar, isla markaana uu tababarka kooxda la bilaabi doono Isniinta maanta.
Xiddiga reer Masar ayaa taam u ah inuu ciyaaro kulanka Champions League ee kooxdiisu ay Arbacada kusoo dhoweyn doonto naadiga Talyaaniga ah ee Atalanta, taas oo haddii ay guuleystaan ay diyaarsan doonaan booskooda wareegga xiga.
Laakiin Mohamed Salah ayaan loo ogolaan doonin inuu si toos ah u safto kulankaas illaa inta uu buuxinayo shuruudda UEFA ee sheegaysa in dhamaan ciyaartoyda lagu sameeyo baadhitaan oo natiijadana loosoo bandhigo, taas oo ka dhigan in maanta laga samayn doono baadhitaan kale oo uu kala mid yahay ciyaartoyda kooxda.
Jurgen Klopp oo xalay warbaahinta la hadlayay ayaa yidhi: “Waxaan maqlay inuu ka bogsaday xanuunkii maanta (shalay) oo uu Negative noqday. Hadda laga bilaabo wax waliba waa caadi tijaabooyinka oo dhan.
“Berri (maanta) ayuu baadhitaankii UEFA e Champions League mari doonaa, waxaanan hubaa inuu sidaas ahaan doono, tababarkana wuu nala qaadan doonaa Isniinta.
“Maalinta xigtana waxa jiri doonta baadhitaan Premier League qaadi doono, markaa laba baadhitaan ayaa jiraya labada maalmood ee soo socda. Dhamaantayo waa la nagu samaynayaa.”
Klopp waxa kale oo uu ka hadlay Naby Keita oo dhaawac muruqa kasoo gaadhay qaybtii dambe ee kulankii Leicester, garoonkana ka baxay daqiiqaddii 53aad iyo Xherdan Shaqiri oo isaguna kusoo dhaawacmay kulamadii caalamiga ahaa.
“Naby wuxuu dareemay dhaawac muruqa ah, waxaanu awoodi waayey inuu sii wato ciyaarta, haddii kale garoonka ayuu sii joogi lahaa.” Ayuu yidhi Klopp.
Shaqiri ayuu isagana ka hadlay dhaawaciisa, waxaanu yidhi: “Shaq wuxuu ka dhaawacmay muruqa xilligii uu xulka qaranka ku maqnaa, isaguna isma ogeyn. Wuu nala tababartay kaddibna xoogaa ayuu dareemay. Waxa aanu ka qaadnay sawir muujiyey inuu dhaawacnaa shan ama lix maalmood.
“Cidina may ogey, xataa Shaq isma ogeyn, sidaa darteed ayaanu kulankan u joogin.”